Nei hupfumi hweUS huchavakazve zvakasiyana
AF : https://www.hebergementwebs.com/leierskapstrategie/waarom-die-verenigde-state-sal-die-ekonomie-anders-herbou
KA : https://www.hebergementwebs.com/ხელმძღვანელობა-სტრატეგია/რატომ-გაერთიანებული-სახელმწიფოები-ეკონომიკას-აღადგენს-სხვანაირად
Iyo nyowani CDC nhungamiro inobvumira kubviswa kwemasikisi kune vazhinji vakabayiwa majekiseni eAmerica.
Paive nechiitiko chikuru muhupfumi hweUS svondo rapfuura. MuSeattle, mumwe mukadzi wechidiki akaenda kumafirimu iye pachake ari munhandare. Iye neshamwari yake ndivo vega vaivapo, uye vakabayiwa majekiseni uye vakafukidzwa, asi mushure megore rinopfuura gore kubva pazviitiko zviripo, chiitiko chakakosha zvikuru kumukadzi wechidiki.
Mukadzi wechidiki aive mwanasikana wangu. Iyo bhaisikopo yaive Dhimoni Slayer. Iyo yemitambo yaive isina chinhu zvekuti akazopedzisira abvunza muprojekisiti kuti adzikise vhoriyamu sezvo paive pasina vamwe vatori vechikamu kuti vapinze ruzha rukuru rwemhedzisiro yemufirimu. Asi, ikozvino iye neshamwari dzake vabaiwa jekiseni, akatsunga kuenda kune chimwe chimiro chechinyakare.
Mushonga unobvumidza chiitiko ichi kutamba mumamiriyoni ezviitiko zvakafanana nenyika. Asi kunyangwe iyo iyonyika iri kuvhurwa, iyo yekutanga euphoria yekukurumidza uye kwakakura kuvhurwa inosangana nekufungira mushure meiyo isingasviki-stellar mabasa mushumo svondo rapfuura. Saka chii chiri kunyatso kuitika? Hupfumi hweUS hwakagadzirira kuvhurwa here? Chii chichava chakafanana uye chii chichava chakasiyana?
Vatsoropodzi vehutungamiriri hweBiden vakapomera Mushumo weVarombo Mabasa nekuda kwekunyanyisa rovha rovha. GOP yakabvuma uye iri kugadzirira kudzima madhora mazana matatu pamwedzi anopiwa pamusoro pebhenefiti yenguva dzose yemabasa.
Usambofa wakafunga kuti iyo data haitsigire chiito cheRepublican. Vatungamiriri veBiden vanoti: "Mutemo uri pachena: kana iwe uchigamuchira mabhenefiti ekushaya basa uye ukapihwa basa rakakodzera, haugone kuramba iro basa uye kuramba uchiwana mabhenefiti ekushaya basa".
Uye inonongedza kuti iyo yekuwedzera mari yanga iri godend yehupfumi hunoshanda.mari pakushandisa kwevatengi, "Supplemental UI irikuita basa rayo.
Pfungwa ndeyekuti kana hupfumi hwadzoka, hunogona kudzoka chero hwakasiyana. Hazvigone kuti mamwe maindasitiri, seaya anotsigira makambani makuru. makampasi, ari kudzoka pamusoro pemakore akati wandei anotevera.Mamwe akaputika, senge kudzidza kure uye zviitiko zvinooneka, angangodzikira kana kushanduka kuita chimwe chinhu chitsva.
Nyika yese yakasangana (uye, munzvimbo zhinji dze nyika, ichiri kurarama) chiitiko chinotyisa chehukuru husingaonekwe.Zvakaita sekunge kudengenyeka kwenyika kwakazunza chivakwa ndokudonha bapiro, kuchikukura pamwe naye mazana ezviuru zvevagari.Sezvo bhizimusi richisimuka zvakare munzvimbo yakachengeteka kuvaka, munhu wese ane kakutya, uye hupenyu hahuzodzokera pane zvakajairwa kudzamara bapiro rakadonha ragadziriswa uye izvotsvagiridzo ichapedzwa kuona kuti izvi hazviitike futi.
Tinofanira kusvika pakubvumirana nezvakaitika, chii chichava chakasiyana uye nezvatinofunga nezvazvo. Zviroto zvambomiswa. Mari dzakarasika. Zvikwereti zvinofanirwa kubhadharwa. Kunyangwe kufambira mberi kuri kukurumidza, kufambira mberi kwemitsara hakukwanise kudzoka kumamiriro azvino. Tiri kupinda muchinhu chitsva.
Ino ndiyo nguva yekutarisa nhoroondo nefilosofi kutinyaradza uye nekuwana ratidziro yenzira yekumberi. Sosaiti yakatotambura nenjodzi nematambudziko. Pfungwa nyowani netsika zvakabuda mumadota. Zvakatora Black Death kuunza iyo Renaissance.
CDC inoti kuti tinogona kubvisa masiki edu muzviitiko zvakawanda kana tikabaiwa jekiseni. Sezvo vazhinji veAmerica vanobaiwa jekiseni, kusangana mukati meimba kuchazowedzera, neshamwari dzakavimbika pakutanga, asi munguva pfupi,nevamwe vekuAmerica uye, zvishoma zvishoma munguva pfupi, vamwe vagari venyika. sezvavaive.
Asi kana nhoroondo iri gwara, zvinhu hazvizove zvakanyatsoita sezvavaimboita.